ဒူဘိုင်း🥇【ယူအေအီးအတွက်ဝန်ထမ်းခေါ်ယူမှု & လမ်းညွှန်】အတွက် Call Center ဂျော့ဘ်
ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ Center ကအလုပ်အကိုင်အခွင့်အ Call
အဘယ်ကြောင့်ကျနော်တို့ဒူဘိုင်းမှ CV ကိုအပ်လုဒ်များအတွက်အားသွင်းထားသလဲ
ဧပြီလ 26, 2019
ယူအေအီးအားလုံးအကြောင်းကမ်းလွန်စီးပွားရေး Setup ကို
မေလ 8, 2019
ဒူဘိုင်းထဲမှာခေါ်ဆိုမှုစင်တာအလုပ်အကိုင်များ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအကြီးမြတ်ဆုံးအလုပ်အကိုင်အထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောခေါ်ဆိုခစင်တာကုမ္ပဏီများမှအဖြစ်အဖွဲ့အစည်းများအတွက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေစဉ်အတွင်းသင်တို့အဘို့အလွန်ကောင်းသောရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဒါပေါ့ အလုပ်၏ဤမျိုးကစီမံခန့်ခွဲရန်လွယ်ကူသည်မဟုတ် နှင့်သင်တန်း၏, ကသူတို့ရဲ့န်ထမ်းအနေဖြင့်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေအများကြီးယူမယ့်။ ဒါပေမယ့်အဖြစ်မှန်အတွက်အလုပ်အကိုင်အဒီလိုမျိုးမသာဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီ၌ပြစ်မှားမိစေနိုင်သည်ကတကယ်တော့ကမ္ဘာပေါ်မှာမည်သည့်နေရာအရပ်ဆိုလိုဘူးနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်းသည်ဤဆောင်းပါးကိုရေးသားခြင်းဖြစ်ပါသည် ပဲသငျသညျအလုပ်အကိုင်ဒီလိုမျိုးရရန်လမ်းကိုပြသ။ ကျနော်တို့ယေဘုယျအားဖြင့်တန်ဖိုးရှိသောသည်ကောင်းသောအားမရစကားပြောနေကြသည် ပိုလန်အလုပျသမားမြားအတှကျလမျးညှနျ နှင့်အမှန်တကယ်ယူနိုက်တက်အာရပ်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွင်းနေထိုင်နေကြသူတွေကို။
ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ Center ကဂျော့ဘ် Call?
အောက်တွင်သင်လုံးဝအဘယ်မှာရှိခေါ်ဆိုခစင်တာကုမ္ပဏီတွေမှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ် သင်တစ်ဦးအလုပ်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ရနိုင်။ အချို့ကိစ္စများတွင်ဟုတ်, သင်တန်း, သူတို့သည်သင်၏ CV ကို upload လုပ်ဖို့ခဲယဉ်းပါလိမ့်မည်ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန် option ကိုထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်သင်ကပြန်လာရန်အလွန်ကောင်းသောလမ်းကိုဦးတည်ပါလိမ့်မည် အဲဒီမှာစံလမ်းထက်အများကြီးပိုမြန်။ ဒူဘိုင်းအတွက်ခေါ်ဆိုမှုစင်တာအလုပ်အကိုင်များယူအေအီးသွားဖို့ 100% တန်ဖိုးရှိဖြစ်ကြသည်။
ဒူဘိုင်းအတွက်ရေးစင်တာကုမ္ပဏီများယဇ် Call ကြောင်းန်ဆောင်မှုများ
ခေါ်ဆိုမှုစင်တာကုမ္ပဏီအများစုကပြန်-ရုံးစစ်ဆင်ရေးအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ကြသည်။ ထိုအခါသူတို့ကိုကျော် 80% ပြေး အဖြစ်အဆင့်မြင့်ဖောက်သည်အပြန်အလှန်ကုမ္ပဏီများမှ.
ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ ပိုပြီးကုမ္ပဏီများသည်နိုင်ငံတကာဖြစ်လာ ဒီလိုကျယ်ပြန့်ကွန်ပျူတာ-တယ်လီဖုန်းပေါင်းစည်းမှုအဖြစ်အင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူပဲရှိတယ်။ နှင့်လူမှုရေးမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် ကုမ္ပဏီများနှင့်ဆက်စပ်သောကြော်ငြာလုပ်ငန်း။
ဤသည်ကုမ္ပဏီတွေဟာသူတို့ရဲ့ဖောက်သည်ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အစဖောက်သည် databases ကိုချမှတ်ရန်ခွင့်ပြု။ အထူးသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကုမ္ပဏီများမှအကြောင်းပြောနေတာလျှင်။ သူတို့ကဒူဘိုင်းအတွက်မူဘောင်များနှင့်ပစ်လွှတ်စီမံကိန်းများနှင့်အညီစီမံကိန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်ကြသည်။ ထိုအတိုတောင်းတဲ့အချိန်အပိုင်းအခြားအတွင်း၌အောင်မြင်ရန်ရှာဖွေနေမိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီများသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ခေါ်ဆိုမှုစင်တာအလုပ်အကိုင်များဖောက်သည်အပြန်အလှန်စက်ရုံ enabled နေကြတယ် အမြင့်ဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှအဆင့်ဆင့်အပေါ်။ ဒီလိုဖောက်သည်အအေးခေါ်ဆိုမှုကုမ္ပဏီများအဖြစ်ကုမ္ပဏီများသည်ယခုသူတို့ဖောက်သည်များအတွက်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုအကွာအဝေးကယ်တင်နိုင်ဖြစ်ကြသည်။ အများအားဖြင့်ဖြည့်ဆည်းဖို့ဒီဇိုင်း ခေတ်သစ်နေ့ရက်ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအဘူဒါဘီသို့မဟုတ်ဒူဘိုင်းကော်ပိုရေးရှင်းလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်.
အောက်ပါအလုပ်အကိုင်များနေရာလွတ်အပါအဝင်အေးခေါ် ဆို. နှင့် Call Center ကုမ္ပဏီတွေ:
အတွင်းသို့ helpdesk အတွက်ဂျော့ဘ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ client များအတွက်ဖြေရှင်းနည်းများ.
အမိန့်, ယူပြီးအစားထိုး ညှိနှိုင်းနှင့်အတူဖုန်းကျော်.
တစ်ခဲမျိုးဆက်အလုပ်အမှုဆောင်များနှင့်အပြင်ထွက် telesales လက်ထောက်အဖြစ်ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်အရေးအပါဆုံး။
တစ်ဦးအဖြစ်လုပ်ငန်းခွင် အတွင်း, အပြင်အင်ဂျင်နီယာနည်းပညာဆိုင်ရာလက်ထောက်.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည့်စုံဖောက်သည်အပြန်အလှန်ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အတူ, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကသူတို့လုပ်ငန်းစဉ်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုင်းတာနိုင်ပါတယ်, အဝေးရောက်လုပ်ဆောင်ဖောက်သည်အကူအညီများပေး, နှင့်မရှိပါအရင်းအမြစ်များကိုချထားပေးခြင်းမရှိဘဲ, လုပ်ငန်းလည်ပတ်တိုးတက်မှုအတွက်ဒေတာစုသိမ်းမည်။
ဒူဘိုင်းအတွက် TeleServices.ae ကုမ္ပဏီ
ကဒူဘိုင်းရှိ Dallas န်ဆောင်မှုများကုမ္ပဏီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နှောင်းပိုင်းတွင်ပေါ်ပထမဦးဆုံးကုမ္ပဏီမှာ။ ဒါကအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည် ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင် Arabic အဘိဓါန်ကြောင့်လူသိများအရှိဆုံးဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့၏တဦးတည်းနှင့်အများအားဖြင့်.
အတူလုပ်ကိုင်နေစဉ် ဒူဘိုင်းရှိကုမ္ပဏီများ။ အရေးပါသောအရွယ်အစားသည်သင့်အားပိုမိုမြန်ဆန်စွာရာထူးတိုးမြှင့်ပေးရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့် ကြှနျုပျတို့သညျဤကုမ္ပဏီရန်သင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင် upload ရန်သင့်အားပြင်းပြင်းထန်ထန်အားပေး။ ထိုအခါသူတို့ကိုရန်အခွင့်အလမ်းပေး ဒူဘိုင်း၌သင်တို့ကိုအင်တာဗျူး သို့မဟုတ်ပင်လယ်ကွေ့ဒေသတွင်မဆိုရာအရပျ။
သူတို့ကသူတို့ရဲ့ website တွင်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောအပိုင်းမဆိုမှာဦးတည်ကြသည်မဟုတ်။ ဒါပေမယ့်သင်အမှန်တကယ်အဘယ်သို့ပြုနိုင်ကြဘူး အဲဒီမှာအလုပ်ရရန်လူတစ်ဦးမှာသူတို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ကိုအဆက်အသွယ်အပိုင်းပေါ်အမြန်အင်ဖိုပေးပို့ပါ။ ဤရွေ့ကား, သင်ကုမ္ပဏီတခုမှသူတို့ကိုတိုက်ရိုက်အတွက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပေးပို့ခြင်းအားဖြင့်အလုပ်အကိုင်အရနိုင်သည့်နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။ ဒူဘိုင်းအတွက်တခါတရံအမှန်တကယ်တစ်ပေးခြင်းအခွင့်အလမ်းရကျိုးနပ်ကြောင်း။ ကြီးကုမ္ပဏီများအများစုမှာအဆက်အသွယ်အပိုင်းအပေါ်တိုက်ရိုက်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ပေးပို့ခြင်းနေသော၎င်းတို့၏လူများပြန်တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။
Contact Center Back ကိုရုံး
ဒါဟာဒုတိယအရွယ်အစားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည် Google ကအညီ။ နှင့်ဤကုမ္ပဏီကိုတကယ်အလွန်ကောင်းသောန်ဆောင်မှုများပေးပြီးအလွန်ဒူဘိုင်းအတွက်၎င်း၏ client များအတွက်ဝန်ဆောင်မှုများကိုတိုးချဲ့နေပါတယ်။ သို့သော်ဤကုမ္ပဏီကသူတို့ရဲ့ website သို့ပေါ်တွင်အလုပ်အကိုင်အပိုင်းမှာခေါင်းမရကြဘူး။ သင်တို့မူကားရန်အဖြစ်အသုံးပြုသူတို့ကိုသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်နှင့်သင့်အတွေ့အကြုံကိုအကြောင်းကိုအမြန်သတင်းအချက်အလက်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်သင်ကအကောင်းတစ်ဦးရှိသည်မယ်လို့ သူတို့နှင့်အတူအလုပ်ရတဲ့၏အခွင့်အလမ်း ထိုကဲ့သို့သောဒီကုမ္ပဏီအဖြစ်အကြီးမားဆုံးအမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဌာနနှင့်အတူစကားပြောနှင့်သင်တန်းသင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်း။
ထိုအသင်အစာစား ယခင်က telophase သို့မဟုတ်ပင်အအေးခေါ်ဆိုမှုန်ဆောင်မှုအတွက်ကြုံတွေ့ဘဲလျက်။ ကျိန်းသေသင်ဒူဘိုင်းအတွက်ခေါ်ဆိုခစင်တာအလုပ်အကိုင်များရရှိရန်ကူညီပေးပါမည်ဤနည်းသင်တစ်ဦးပြန်ခေါ်ပေးပါနှင့်သင်တန်းသင့်ပါတယ်ရှိခဲ့သည်။
Center ကိုအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးန်ဆောင်မှုများကုမ္ပဏီ Call အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့ထားပြီး နှင့် 2006 အတွက်စစ်ဆင်ရေးစတင်သည် တစ်ဦးဦးဆောင်ကုမ္ပဏီအဖြစ်။ ဒါကကုမ္ပဏီဒူဘိုင်းအတွက်အအေးခေါ်ဆိုမှုကုမ္ပဏီများ၏အကြီးမားဆုံးသောတီထွင်မှုများ၏တဦးတည်းမှာဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော်ဒီကုမ္ပဏီအပေါ်၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်အပိုင်းရရှိရန်စီမံခန့်ခွဲထားပြီးဖြစ်ပါတယ် အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အထိပ်ထောင့်ရှိအက်ဘ်ဆိုက်၏ရှေ့။ ယေဘုယျအားဖြင့်သူကဒူဘိုင်းအတွက်အတော်လေးအလုပ်များအရပ်ပေါ်မှာအခြေခံသည်ဒီကုမ္ပဏီစကားပြော။ သူတို့ကအလုံအလောက်ထက်ပိုသော 20 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကျော်ရှိခြင်းနေကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, လေးခု-ကြယ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့်သင်သည်ထိုသူတို့ခေါ်နိုင်ပါတယ် သင်၏ CV ပို့ပေးပါရန်။ ထိုအဆိုမှာ, သင်သည်ထိုသူတို့နှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး get အလုပ်အကိုင်အဖို့သူတို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်။
သူတို့ထဲကရာပေါင်းများစွာဘို့အကြောင်းကိုအလုပ်ဘူတာရုံ၏ဤကုမ္ပဏီ 500 န်ထမ်းကိုကျော်မိုးသည်းထန်စွာဖြစ်ပါတယ်တွေအများကြီးနဲ့ သင်အမှန်တကယ်သူတို့နှင့်အတူအလုပ်ရနိုင်။ ကြောင်း၏ထိပ်တွင်, ဒီအဖွဲ့အစည်းကလေးကျော်ထဲမှာ run နေ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံများတွင်ဒူဘိုင်းဆော်ဒီအာရေဗျနဲ့ကာတာရှာတတ်၏။ နှင့်ဤကုမ္ပဏီကမ္ဘာပေါ်မှာမည်သည့်အရပ်ဌာန၌အက်ဆေးတိုးမြှင့်မယ်လို့ခဲ့ပါဘူး။
ဒါကြောင့်ကျိန်းသေအွန်လိုင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမှာကြောင်းမန်နေဂျာ၏ထိပ်ပေါ်မှာကြည့်၎င်းတို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုစစျဆေးဖို့ပြောပါတယ်ပါပြီ။ ထိုသူတို့၏ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်ရန်ကြိုးစားခဲ့ သင့်ရဲ့ updated ကိုယ်ရေးရာဇဝင်နှင့်အတူလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဌာန။ တဖန်သင်တို့ကျိန်းသေစိတ်ဝင်စားဖို့အလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှုရပါလိမ့်မယ်။ သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးသင်လိမ့်မည် ဒူဘိုင်းအတွက်ငှားရမ်းသောကုမ္ပဏီမှကိုယ့်ကိုကိုယ်မိတ်ဆက်ရ။
စော်ဘွား DOZ Contact Center
စော်ဘွားသည်အခြားဖြစ်ပါသည် ပင်လယ်ကွေ့ဒေသလုပ်ကိုင်ဖို့ကောင်းသောကုမ္ပဏီ။ သူတို့ကညီညွတ်သောအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုဒူဘိုင်းအတွက်ဖုန်းခေါ်စင်တာအလုပ်အကိုင်များရှိခြင်းနေကြသည်။ သင် ... သင့်တယ် ကျိန်းသေသူတို့ရဲ့ website မှာကြည့်.
ဒါကကုမ္ပဏီဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်း၏အဆုံးမှာပါလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည် အချိန်ကြာမှသူတို့နှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလာပြီ။ အဆိုပါစော်ဘွားကုမ္ပဏီ ocasionally ပေမယ့်ရောဂါဖြစ်ပွားမှု၏အများဆုံးများတွင်ကျွမ်းကျင်သူများငှားရမ်းသည် သင်သည်သင်၏လက်၌ဗီဇာရှိသည်ဖို့လိုအပ် သူတို့နှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်ရှိသည်။
ဤသည်မှာအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည် စော်ဘွားကုမ္ပဏီကမ်းလှမ်းဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ ယူအေအီး၌အကြှနျုပျတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဖောက်သည်။ ဒါကကုမ္ပဏီသေချာများအတွက်သင်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ် နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များရရှိရန် ဒူဘိုင်းအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၌ဤခေါ်ဆိုခစင်တာအလုပ်အကိုင်များအကြောင်းကို။
လူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာလုံးကျော်3ကျော်အခက်များနှင့်အတူတစ်ဦးကကုမ္ပဏီ၏။ သူတို့ကဝါဆောအတွက်ရုံးရှိခြင်းကြသည် - ပိုလန်, ဒူဘိုင်း, ယူအေအီးနှင့်ကိုင်ရို, အီဂျစ်။
ဒါကကုမ္ပဏီ အရှေ့အလယ်ပိုင်းစျေးကွက်အတွက်အကြီးမြတ်ဆုံးကုမ္ပဏီတဦးတည်း။ သာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကို operate ။ သငျသညျကသူတို့ရဲ့ website သို့ကြည့်ရှိသည်နှင့်သင့်ရဲ့ updated CV ကိုနှင့်အတူလျှောက်ထားသို့မဟုတ်သူတို့ကိုသင့်ရဲ့အတှေ့အကွုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်တစ်ဦးပွိုင့်ပေးရခြင်းနှင့်မှော်ဖြစ်ပျက်မှုအတွက်စောင့်ဆိုင်းသင့်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ကကိုယ့်အတွက် pop နှင့်သင့်တီဗီအတှေ့အကွုံမှစက်စက်ကျဖို့တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကရကျိုးနပ်သည်ဟုဆိုသည်လိုပဲ အလားအလာကုမ္ပဏီမှ သူတို့ရဲ့လယ်ကွင်းထဲမှာကျနော်တို့တစျရာကျြောကလူကုမ္ပဏီများအများစု၏။ အကြောင်းမူကား, ဒါကြောင့်သင်ကကျိန်းသေသည်သင်၏မြည်းကို app ကိုရွှေ့နှင့်ကြိုးစားသင့် ပိုပြီးသတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်, ဥပမာ, cryptocurrency ရောင်းချနေ.
Ingres Call Center ကုမ္ပဏီ
ဆိုရှယ်မီဒီယာအတွက်ဒါလူကြိုက်မများအဖွဲ့အစည်းက Google ကအတော်လေးကောင်းသောန်ထမ်းအပေါ်ကိုပင်လူကြိုက်မများ။ ဒါကကုမ္ပဏီတစ်ခုအဖွဲ့အစည်းကြီးထွားလာသည်နှင့်သင်လျှင်ကျိန်းသေ, သင့်ကိုယ်သင်ဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုကအလွန်တန်ဖိုးရှိသောလူတစ်ဦးကိုတွေ့လိမ့်မည် အရောင်းဌာနအတွေ့အကြုံရှိခြင်း။
ဒီကုမ္ပဏီကိုဆက်သွယ်ပါ သွယ်ဝိုက်နှင့်သင့် CV ကိုအပေါ်သမင်မျက်စိ get ကြိုးစားပါ။ ကျိန်းသေသင်သူတို့ကိုသို့မဟုတ် Facebook ပေါ်မှာလင့်ခ်ဖြုတ် Facebook အတွင်သို့မဟုတ်ပေါ်မှာလင့်ခ်ဖြုတ်ရှာတှေ့နိုငျကဒီကုမ္ပဏီအတွက်စီမံခန့်ခွဲမှုအကြောင်းပိုမိုသတင်းအချက်အလက်မှကိုယ့်ကိုကိုယ်စီမံခန့်ခွဲသင့်ပါတယ်။ တိုက်ရိုက်အပူဖို့ကြိုးစားပါ အဲဒီမှာလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဌာနနှင့်သင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပူဇော် သူတို့ကိုမှအဘူဒါဘီသို့မဟုတ်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်သစ်ရဖို့သင်ကူညီနိုင်စရာဖြစ်ရပေလိမ့်မည်။
Ziwo ကုမ္ပဏီဥရောပအများအပြားနိုင်ငံများတွင် operating သည် အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အာရှ။ ကျိန်းသေ, ပြင်သစ်နှင့်ယူအေအီးထိပ်တန်းကုမ္ပဏီကြီးများ၏တဦးတည်းအနေနဲ့အလုပ်အမှုဆောင်မန်နေဂျာအဖြစ်လုပ်ကိုင်ဖို့။ သင်သည်သင်၏အီးစတင်နိုင်ပါသည်ဘယ်မှာအောင်မြင်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး mployment နှင့်ဖြစ်လာ အရောင်းနှင့်အအေးခေါ်ဆိုမှု setting ပတ်ဝန်းကျင်၌တည်၏။
သေချာဘို့သင့်ကိုဤအဖွဲ့အစည်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တယ် သူတို့ရဲ့န်ထမ်းရတဲ့ဖို့ထိပ် rated ကုမ္ပဏီတွေရဲ့တဦးတည်း။ ဒါကကုမ္ပဏီလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်န်ထမ်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏ငှားရမ်းခြင်းနှင့်ယခုအချိန်တွင်သူတို့ဒါဟာနှင့်အရောင်းရှာနေ အလုပ်အမှုဆောင်လူတစ်ဦး။
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ updated လှုံ့ဆျောမှုလျှောက်လွှာပုံစံနှင့်အတူသင်၏လျှောက်လွှာကိုသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်စဉ်းစားသင့်သို့မဟုတ် သူတို့တကယ်ဒူဘိုင်းအတွက်ငှားရမ်းနေသောကွောငျ့ပဲသူတို့ကိုဖုန်းခေါ်ပေး.
ဒါကအဖွဲ့အစည်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရငျးတှငျ အတူအလုပ်လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီတွေရဲ့တဦးတည်း။ သူတို့ကအမှန်တကယ် Non-အတွေ့အကြုံရှိလုပ်သားများငှားရမ်းအဖြစ်မန်နေဂျာနှင့်အကြီးတန်းမန်နေဂျာနေကြသည်။ ဒါကြောင့်သင်အလုပ်အမှုဆောင်များမှာ သင်သည်သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖွံ့ဖြိုးရေးကိုတိုးမြှင့်နိုင်မည့်ကြောင်းအလုပ်ကအရမ်းကောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီကိုရနိုင် အဆိုပါ Hyatt နိုင်ငံတကာအဆင့်အထိ။
သူတို့အမှန်တကယ်နေသောကြောင့်ကျောင်းသားတစ်ဦးအဖြစ်, သင်သည်လည်းထိုသူတို့ဖုန်းခေါ်ပေးနိုင်ပါသည် အဘယ်သူမျှမအတွေ့အကြုံနှင့်အတူကျောင်းသားများနှင့်လူများအတွက်ရှာဖွေနေ။ သူတို့သည်သင့်ကိုလေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်သင်ဖောက်သည်များကသူတို့ကိုခေါ်ဆိုခြင်းနှင့်သင်တန်း၏ဖုန်းခေါ်တောင်းဆိုပါလိမ့်မယ်နေချိန်မှာသင်ကအကောင်းတစ်သူတစ်ဦးဖြစ်လာကူညီပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟု သင်တစ်ဦးကုမ္ပဏီအတွင်းမှသင့်ရဲ့အနာဂတ်တန်ဖိုးကိုတိုးမြှင့်ဖို့အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မည်။
Concentrix ကို Global ကုမ္ပဏီ
အဆုံးမဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုကနိုင်ငံတကာဖြစ်ပါသည် စီမံခန့်ခွဲမှုအခွင့်အလမ်းများများအတွက်အဖွဲ့အစည်းက။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ကျောနောက်သို့အတှေ့အကွုံကောင်းသောအနှစ်ရှိခြင်းလျှင်။ သငျသညျကျိန်းသေဒီကုမ္ပဏီဆီကတစ်ခုခုရဖို့ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကအမှန်တကယ်ယခုအချိန်တွင်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်ငှားရမ်းကြသည်မဟုတ်။ သို့သော်သူတို့ကပိုတစ်ခုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကော်ပိုရေးရှင်းကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။ ဒါကြောင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကတန်ဖိုးရှိပါလိမ့်မည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖှံ့ဖွိုးတိုးတ.
ကျနော်တို့ကျိန်းသေဒီအဖွဲ့အစည်းကိုရွေးချယ်ဖို့ကုမ္ပဏီရှိသည်မယ်လို့ဆိုပါက ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အသက်တာ၌ထူးချွန်ဆုံးလှုပ်ရှားမှု၏တဦးတည်းဖြစ်ရလိမ့်မည်။ ဒီတော့ website တွင်အဲဒီမှာကြည့်ရှိသည်။ သင့်ရဲ့ updated CV ကိုအတူ Apply ။
သို့သော်, သင့် updated ကိုယ်ရေးရာဇဝင်လျှင်ကစီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်တွင်မကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကိုသင့်ရဲ့ updated ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ပေးပို့ပါ။ တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားထိပ်တန်းစီမံခန့်ခွဲမှုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းကို join ။
ဒီကုမ္ပဏီကြောင့်မသွားရကျိုးနပ်သည်နှင့်သူတို့အနေကြောင့်, အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဦးတည်ထဲမှာဒူဘိုင်းကိုကြည့်ဖို့ကမ်းလှမ်း။ Concentrix လည်းဥရောပအာရှနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိငှားရမ်းသည်။
ဖြစ်စဉ်ကို Call Center ကုမ္ပဏီ
တစ်ဦးကအလွန်ကောင်းသောကုမ္ပဏီ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွင်းအလုပ်လုပ်ရန်။ သင်တစ်ဦးဒူဘိုင်းအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီအတွက်အလုပ်လုပ်ရှာဖွေနေပါကယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော။ ဒါကအဖွဲ့အစည်းကအလုပ်အကိုင်အခွင့်အကမ်းလှမ်းမှုရတဲ့အတွက်အလွန်စမတ်စိတ်ကူးတူသောပုံရသည်။ တရာကုမ္ပဏီတွေကမတူကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းကိုတွင်။ ဒါပေမဲ့ဒီကုမ္ပဏီ ဒူဘိုင်းအခြေစိုက်ရာခိုင်နှုန်းတရာဖြစ်ပါသည် သင်ရုံးသို့ pop နှင့်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်မန်နေဂျာကိုဆက်သွယ်ဘို့ကအလွန်လွယ်ကူပါလိမ့်မယ် သူတို့ရဲ့ဒူဘိုင်းရုံးထဲမှာအိန္ဒိယကနေ.
သငျသညျဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှိသည်သွား။ သူတို့ဟာအခြေခံအတွေ့အကြုံနှင့်အတူပင်ငှားရမ်းသို့မဟုတ် သင်ပိုမိုကြီးကြပ်ရေးမှူးသို့မဟုတ်အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အခွင့်အလမ်းများကိုအဘို့အခွင့်အလမ်းရှိနိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့ကအကောင်းကုမ္ပဏီခေါ်ဆိုမှုစင်တာပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလုပ်လုပ်အဖြစ်ဤကုမ္ပဏီဝတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီအမြဲပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းလုပ်ပါ။ ကျနော်တို့ကျိန်းသေဒီကုမ္ပဏီလည်းဖြစ်ပါသည်ပြောနိုင် ဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်ပင်အဘူဒါဘီ၌ကြီးစွာသောရာအရပျ သူတို့ထဲမှာသငျသညျနေရာအခွင့်အလမ်းရလိမ့်မည်ဆိုပါက အကြီးမြတ်ဆုံးမြို့တအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုစည်းလုံးညီညွတ်.
ကျနော်တို့၏ CV ကိုကြည့်ရှုရန်မျှော်လင့်ချက်ရှိခြင်းနေကြသည်။ ထိုအသေချာဘို့သင့်ကိုတစ်ခုခုရနိုင် ထိုကဲ့သို့သောဒူဘိုင်းအခြေစိုက်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်စိတ်ဝင်စား။
အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွင်းအကြီးမားဆုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ။ ဤသည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီ၌မသာရုံးတင်ဆောင်လာသော။ သူတို့ကအိန္ဒိယအတွက်ရုံးများနှင့်ဒူဘိုင်းတွင်အများအပြားသောနေရာများအတွက်ဆက်သွယ်ရေးရုံးကြီးထွားလာခြင်းနှင့်ဦးတည်နေကြတယ်။
သငျသညျရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ဟာကိုယ်အလုပ်ရရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းစီမံခန့်ခွဲရန်။ ဒါကကုမ္ပဏီကျိန်းသေကြောင့်သင်သည်သင်၏အသက်တာ၌အောင်မြင်မှုရရှိစေရန်ကူညီပေးပါမည်။ သူတို့က Google မြေပုံပေါ်တွင်နီးပါး5ကြယ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းရှိခြင်းနေကြသည်ရိုးရှင်းစွာအကြောင့်။ ထိုသူတို့ကိုပေးခြင်းဖြစ်ပါသည် တစ်ခုအံ့သြဖွယ်အခွင့်အလမ်းများနှင့်တစ်ဦးအလွန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ချဉ်းကပ်မှု အဆိုပါ client နှင့်ဝန်ထမ်းများသည်။
ဒီတော့အလုပ်တစ်ခုရှာသူအဖြစ်သင်တို့ကိုကျိန်းသေဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူအလုပ်ရရန်ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံး သငျသညျကသူတို့ရဲ့ website သို့ပေါ်တွင်သင်၏ updated CV ကိုပို့ပါ။ ရုံကြောင်းအထိစောင့်ဆိုင်းကာလဖြစ်၏ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အကမ်းလှမ်းမှုလက်ခံရရှိရန်.
စင်ကြယ်သောအာရပ်စော်ဘွားပြည်ထောင်စုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီ။ ဒါကအဖွဲ့အစည်းကမျိုးစုံပြေးနေသည် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်ကြီးမားသောခရိုင်အသိုင်းအဝိုင်းစစ်ဆင်ရေး။ ထို့အပြင်ယူအေအီးအတွက်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများ၏ 116m စတုရန်းပေကျော်စီမံခန့်ခွဲခြင်း။ ဒါကကုမ္ပဏီမျိုးစုံအဖွဲ့အစည်းနှင့်အသိုင်းအဝိုင်းတို့ကအပြေးလျက်ရှိသည် ကြီးမားသောခရိုင်စစ်ဆင်ရေး။
နှစ်ခုရုံးများရှိခြင်းအဖွဲ့။ ပထမဆုံး ရုံးဒူဘိုင်း၌တည်ရှိ၏နှင့်ဒုတိယတစျခုအဘူဒါဘီ၌တည်ရှိ၏။ အထဲတွင် pop သူတို့ကိုသင့်ရဲ့ updated ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ပေးရလိမ့်မည်စမတ်လမ်း။ ထိုအခါကံကောင်းအခွင့်အရေးအသုံးပြုပုံ သငျသညျအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အကမ်းလှမ်းမှုရပါလိမ့်မယ် သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးသင်သည်သူတို့၏နေရာလွတ်နှင့် ပတ်သက်. နက်ရှိုင်းသောသတင်းအချက်အလက်ရပါလိမ့်မယ်။
နောက်ထပ်စမတ်စိတ်ကူးသူတို့ကိုဖုန်းခေါ်ပေးခြင်းမှဖြစ်လိမ့်မည်။ သူတို့အနေနှင့်အမျှ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအခြေစိုက် စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူကုမ္ပဏီအတွင်းရှိကိုယ်စားလှယ်များစကားပြောကောင်းတစ်ဦးအခွင့်အလမ်း။ နှင့် အလုပ်အားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးလိမ့်မည်သူတစ်ဦးလာအောင် သို့မဟုတ်ပါကတစ်ဦးအလုပ်သစ်ဆိုတော့များအတွက် 50% အခွင့်အလမ်းထိုကဲ့သို့သောကြောင်းတစ်ဦးအဖြစ်ကုမ္ပဏီများမှထံမှကမ်းလှမ်းသင်ပေးမည်။
အသိဉာဏ်စီးပွားရေး Technologies က
ဒါကကုမ္ပဏီအစအဦးအတွက်ရုန်းကန်ခဲ့ရသည်။ ယခုမှာသူတို့တစ်တွေအကောင်းကုမ္ပဏီပါပဲ။ အပတ်တိုင်းဖောက်သည်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏သိမ်းဆည်းနေသည်။ ဒေတာကာကွယ်မှုများအတွက်ထောက်ပံ့ဖြေရှင်းနည်းများ နှင့်နိုင်ငံတကာနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကို။
အဆိုပါကုမ္ပဏီ 100% ရကျိုးနပ်သည် သင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်အအသေးစိတ်ကိုနှင့်အတူလျှောက်ထားမှုအတွက်။ သငျသညျကသူတို့ရဲ့ website သို့ကြည့်ကြသင့်ပါတယ်။ ထိုသူတို့၏အဆက်အသွယ်ပုဒ်မမှာကြည့်ရှိသည်နှင့်သူတို့ကိုသင်၏ CV ပို့ပေးပါသို့မဟုတ် asap မခေါ်နဲ့ ဖုန်းကျော်ကပြောဆိုပါ။
ရိုးရှင်းစွာအမြန်သငျသညျအခြိနျယူရေးစင်တာဌာန Calling အတွက်အလုပ်လုပ်နေရန်ရှာနေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကုမ္ပဏီမှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်အဖြစ်။ သင်တစ်ဦးသည်အလွန်ကောင်းသောဘာသာစကားရှိသည်ဖို့လိုအပ် သင်အလားအလာဖောက်သည်သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်သင့်ထုတ်ကုန်ရောင်းဖို့ဘယ်လိုသိရန်လိုအပ်သည်။
ဒါကြောင့်ဒီလိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီအဖြစ်ဤအဆင့်တွင်အဖွဲ့အစည်းနှင့်အတူစိတ်တွင်စောင့်ရှောက်လော့။ သင်တစ်ဦးသည်အလွန်ကောင်းသောတန်ဖိုးကိုရရှိမည်နှငျ့သငျဒူဘိုင်းအတွက်အများကြီးအောင်မြင်ရန်လိမ့်မယ်။ နှင့်ဤကုမ္ပဏီသေချာဘို့ Arabic အဘိဓါန်ယဉ်ကျေးမှုရှိခြင်း။ အလွန်စမတ်စိတ်ကူးဘယ်ဟာဖြစ်ပါသည် Arabic အဘိဓါန်လူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်စတင်ရန်။ သင်ကအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာယဉ်ကျေးမှု၏အမြင်အရဦးမည်
ဒူဘိုင်းအတွက်ငျ RTA ကုမ္ပဏီကကိုယ်ပိုင်ခေါ်ဆိုခစင်တာရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကကုမ္ပဏီအဖြစ်ကောင်းစွာအမှုဆောင်အရာရှိများနှင့်ခေါ်ဆိုခစင်တာမန်နေဂျာငှားရမ်းဖြစ်ပါတယ် သင်တန်းဌာန၌အသစ်သောလုပ်သားများအဖြစ်။
အတွက်ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးအာဏာပိုင် ဒူဘိုင်းန်ထမ်းတွေအများကြီးရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ဖုန်းခေါ်စင်တာအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာတွေ့ ပြည်တော်ပြန်များအတွက်ကောင်းသောဖြစ်နိုင်သည်။ ဥပမာ, ယူအေအီးအတွက်အလုပ်ရှာဖွေသူများကိုသူတို့ပေါ်တယ်ပေါ်တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်နှင့်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုဌာနတစ်ခု option ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
ContactTopia Call Center
A ကောင်းဆုံး Outsourcing သင်တစ်ဦးအလုပ်အကိုင်ကမ်းလှမ်းမှုရနိုင်ရှိရာကုမ္ပဏီ။ သင်သည်သူတို့၏ website နှင့်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအပေါ်တစ်ဦးကြည့်သင့်ပါတယ်။
ဒါကကုမ္ပဏီဝင်ငွေနှင့်အတူအခြားကုမ္ပဏီများကူညီပေးသည်နှင့်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုစပ်လျဉ်းတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ သူတို့ကအမှန်တကယ်ဖုန်းကိုအီးမေးလ်ကထောက်ခံမှုများနှင့်ပင်ကို web ချက်တင်ထောက်ခံမှုပေးနေကြသည်။ သူတို့ကအမှန်တကယ်ရှိပါတယ် အလွန်ကောင်းသောပြည့်စုံသည့်ကုမ္ပဏီ။ ထိုအသင်သည်ထိုသူတို့ဖုန်းခေါ်ပေးပါသို့မဟုတ်သူတို့ကိုမမေးပါလိမ့်မယ်နေစဉ်ကသင့်အီးမေးလ်အကွက်ထဲသို့စီးဆင်းပါလိမ့်မည်အလုပ်တစ်ခုနဲ့တူပုံရသည် သင်တို့အဘို့အမရရှိနိုင်ပါအလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်.
သူတို့ရဲ့ website သို့အကြောင်းကိုစိုးရိမ်နေဖြစ်မနေပါနဲ့။ သူတို့ကအလွန်ရိုးရှင်းပြီးကုမ္ပဏီနှင့်တူပုံပေါ်ပေမယ့်လက်တွေ့မှာတော့သူတို့တကယ်ရှိပါတယ် ကျယ်ပြန့်ထောက်ခံမှုနှင့်အလွန်ကောင်းသောန်ဆောင်မှုများရှိခြင်း။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အချိန်နှင့်သင့်ဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အလွန်ကောင်းသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်တူပုံရသည်ကဒီအဖှဲ့အစညျးမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်။
ဒါကြောင့်စံခေါ်ဆိုခစင်တာအဖွဲ့အစည်းမျိုးမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတကာအရေးပေါ်ကုမ္ပဏီ။ သို့သော်သူတို့ကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခေါ်ဆိုခစင်တာဌာနရှိခြင်းနေကြသည်။ တဖန်သင်တို့အဲဒီမှာသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ပေးပို့သင့်ပါတယ် မှော်ဖြစ်ပျက်နှင့်စောင့်ပါ။ ဒီကုမ္ပဏီကိုတကယ်အပေါငျးတို့သကမ္ဘာလုံးကျော်ပုန်းအောင်းကြပြီးတထောင်မိုးသည်းထန်စွာကြောင့် အားလုံးအလုပ်အကိုင်များဖြင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းပူဇော်.
ဒါကြောင့်ကျိန်းသေကသူတို့ကိုပေးရကျိုးနပ်ဖြစ်ပါသည် အခွင့်အလမ်းနှင့် website တွင်သင့်ရဲ့ updated CV ကိုမှတ်ပုံတင်ရန်။ သူတို့တောင်မှတရုတ်ဥရောပတိုက်တွင်ငှားရမ်းခြင်းနှင့်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နေကြတယ်လို့ပဲ။ ဒါကကုမ္ပဏီဆေးဘက်ဆိုင်ရာဖုံးလွှမ်းခေါ်ဆိုခစင်တာမှပိုပြီးဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့မူကားကောင်းတစ်ဦးအတှေ့အကွုံရှိခြင်းလျှင် ဒီကုမ္ပဏီသင်ကူညီကြလိမ့်မည်ကြောင်းကိုသင်၏ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်တောင်မှအသားတင်န်ဆောင်မှုများကြောင့်လူရောင်းအတွက် ဒူဘိုင်း၌မသာဖွံ့ဖြိုးသင့်ရဲ့အနာဂတ်အောင်မြင်ရန်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌တစ်ဦးကအလွန်ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့အစည်းကို။ ဒါကြောင့် သငျသညျအကောင်းတစ်ဦးကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီရှာဖွေနေလျှင်။ ဒါကအဖွဲ့အစည်းကအလွန်ကောင်းသောကုမ္ပဏီနှင့်တူပုံရသည်။ သငျသညျဒူဘိုင်းရှိအခွားသူမြားစိတ်ဝင်စားအလုပ်ရှာဖွေသူများအကြံပေးနိုင်ပါတယ်။ သင်ဤကုမ္ပဏီနှင့်အတူအကောင်းတစ်ဦးကမ်းလှမ်းမှုများရှိနိုင်ပါသည် သူတို့က Mena ဒေသကြီးအတွက်ကောင်းသောအခွင့်အလမ်းများကိုအများကြီးပေးနေတဲ့လို့ပဲ။
ဒူဘိုင်းအတွက် du-mobile Company မှ
ဤသည်ကုမ္ပဏီအတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ် သင်တစ်ဦးအလုပ်ရနိုင်ရှိရာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအရပျ။ ဥပမာအားဖြင့်, သူတို့ setting နှင့်မိုဘိုင်းအစီအစဉ်များနှင့်တီဗီ packages များအဖြစ်ထုတ်လွှင့်န်ဆောင်မှုများ ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီမှာသူတို့ရဲ့ဖောက်သည်။ ဒါကြောင့်သင်ကကြိုတင်ငွေဖြည့်သို့မဟုတ် postpaid ရှာနေလျှင်။ သငျသညျကျိန်းသေသူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ကုမ္ပဏီက်ဘ်ဆိုက်၏ applications များကြည့်ကြသင့်ပါတယ်။
du မိုဘိုင်းရေတွင်းတစ်တွင်းဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်မိုဘိုင်းဖုန်းကုမ္ပဏီကိုသိသည်။ သို့သော်သူတို့မှာလည်းသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတည်ဆောက်နေ ထိုကဲ့သို့သောကာတာနိုင်ငံနှင့်ဆော်ဒီအာရေဗျအဖြစ်အနည်းငယ်ကအခြားနိုင်ငံများတွင်.
အလွန်ကောင်းသည် သင်ချက်တင်ကျော်စကားပြောနိုင်သည်ဘယ်မှာကုမ္ပဏီ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီထိပ်တန်း rated ကုမ္ပဏီများ, ဥပမာအားဖြင့်, Mc Donald, IKEA, Vodafone နှင့်အများအပြားပိုပြီးနှင့်အတူသင်တန်း၏အလုပ်လုပ်ကိုင်။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်ဒေသခံအလုပ်သမားများကအကြံပေး ဒီအဖွဲ့အစည်းကမှလျှောက်ထားရန်။ ဤသည်မြဲမြံစွာဤမျှလောက်များစွာသောန်ဆောင်မှုများရှိခြင်း။ ဟုတ်ပါတယ်, သငျသညျခေါ်ဆိုမှုစင်တာအေးဂျင့်အဖြစ်နှင့်ဖောက်သည်တစ်ဦးဝန်ဆောင်မှုအလုပ်အမှုဆောင်အဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပါပြီနိုင်ပါတယ်။
တိုက်စားမှု Group မှ Call Center
တိုက်စားမှု Group နဲ့တစ်ဦးခေါ်ဆိုခစင်တာအလုပ်အကိုင်များ။ အဆိုပါကောင်းသောအုပ်စုတွင် 1967 ပြီးတော့တိုက်စားမှု Group မှခုနှစ်တွင်စစ်ဆင်ရေးစတင်ခဲ့သည် ဒူဘိုင်းအတွက် Deira များ၏ကုန်သွယ်အချက်အချာမှာ set up ခဲ့သည်။ ထိုမှတပါး, ထိုကာလကတည်းကကုမ္ပဏီ၏အခြားအဆင့်အထိပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ သငျသညျအလုပျရှာတှေ့နိုငျတဲ့ကြီးမားတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်လာသည်။ ထို့အပွငျတိုက်စားမှု Group မှစားသုံးသူအီလက်ထရောနစ်တစ်ဦးအပြည့်အဝမယ့်ကြည်ကြည်ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်လက်လီအရောင်းဆိုင်ဖြစ်ပါသည် ယူအေအီးနှင့် GCC ၌တည်၏။
ဤသည်အံ့သြဖွယ်ဒူဘိုင်းအဖွဲ့အစည်းကိုစီမံခန့်ခွဲထားပါတယ် တဦးတည်းတစ်ခုတည်းအမှတ်တံဆိပ်ပေါ်န်ထမ်းတစ်ဦးလက်တဆုပ်စာအတွင်းအလုပ်လုပ်ရန်။ ဒါကကုမ္ပဏီတကယ်သင်၏အချိန်တန်ဖိုးရှိသူတို့ extensionally စိုက်ပျိုးကြပါပြီဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီဈေးကွက်ထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီမျိုးစုံအမှတ်တံဆိပ်ထည့်သွင်း, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသူတို့ရဲ့လိုင်းများမှထုတ်ကုန်များနှင့်အံ့သြဖွယ်န်ဆောင်မှု။ ထို့အပွငျတိုက်စားမှုအုပ်စုသည်ယူအေအီးအတွက်၎င်း၏လက်ရှိစီမံကိန်းများကိုမှတက်လာရန်အကြောင်းပါ။
HSBC ကသူ့ရဲ့ကိုလည်း Call Center ရှိခြင်း
နာမည်ကျော် HSBC ကကုမ္ပဏီလည်းကောင်းတစ်ဦးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်သူတို့ကသူတို့တစ်တွေမုန့်ဖုတ်နှင့်ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ဆက်စပ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာပုံမှန်ခေါ်ဆိုခစင်တာမရှိကြပေ။
HSBC ကဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်ကကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး-rated ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီထက်ပို 39 သန်းဖောက်သည်အစေခံရန်စီမံခန့်ခွဲ ဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီ၌မသာ။ အဆိုပါ HSBC ကဘဏ်နှင့်ကုန်သည်န်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီ GCC ဒေသတွင်း၌လေးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှတစ်ဆင့်လုပ်ဆောင်နေကြပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်စီးပွားရေးလက်လီဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများကို။ ထိုမှတပါး, ဒူဘိုင်းအတွက်အထူးဖောက်သည်များအတွက်စည်းစိမ်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု။
HSBC ကယူအေအီးအတွက်စီးပွားဖြစ်ဘဏ်လုပ်ငန်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သည်။ ဤသည်ကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘဏ်လုပ်ငန်းများအတွက်ပြေးနဲ့ GCC စျေးကွက်များ။ သို့သော်မန်နေဂျာကို Global ပုဂ္ဂလိကဘဏ်လုပ်ငန်းများအတွက်အလုပ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌စကားပြောရကျိုးနပ်ဖြစ်ကြသည်။ HSBC ကကွန်ယက်ကို 66 နိုင်ငံများနှင့်နယ်မြေများကိုဖုံး ဥရောပတိုက်တွင်, အာရှ, အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အာဖရိက, မြောက်အမေရိကနှင့်လက်တင်အမေရိက။
အင်ဒီးယန်းလုပ်သားများနှင့် Call Center
ကောင်းပြီ, အမှန်တကယ် Indy ခေါ်ဆိုခစင်တာဌာနများနေသောအဓိကအုပ်စုသည်အိန္ဒိယလူမျိုးဖြစ်ကြသည်။ လူတွေ၏ဤအုပ်စုသည်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အဓိကလူမျိုးဖြစ်ကြ၏။ ဒါကြောင့်ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော သငျသညျအိန်ဒိယနိုငျငံကနေဒူဘိုင်းမှလာမယ့်လျှင်။ call center ဦးစီးဌာနအလုပ်အကိုင်များသို့မဟုတ်ဖောက်သည်န်ဆောင်မှုဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာအမြန်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ဒူဘိုင်းကမ္ဘာတဝှမ်းကလူများအတွက်အံ့သြဖွယ်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ နှင့်အင်ဒီးယန်းတွေဟာ ဒူဘိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်၏အားသာချက်ကိုယူပြီး။ သူတို့ကပိုက်ဆံကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏကိုအောင်ကြသည်မဟုတ်။ သို့သျောလညျးသငျသညျစံလျောက်ပတ်သောအလုပ်ရနှင့်သင်လူတွေကိုကူညီ start လျှင်။ ထို့အပွငျကလူအကြံပေးနှင့်အကွောငျးပွ သူတို့လိုအပ်မယ့်ထုတ်ကုန်ရတဲ့လူ။
သငျသညျကျိန်းသေအကြားလမ်းလျှောက်သင့်ပါတယ် ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့အင်ဒီးယန်း။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဒီလိုမျိုးကမ်းလှမ်းမှုတွေကမ်းလှမ်းလာကြတဲ့လူတွေပေါ့။ တဖန်သင်တို့အတွေ့အကြုံအချို့ရှိလိမ့်မည်နေစဉ်။ သငျသညျကျိန်းသေဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအကြောင်းကိုနည်းနည်းပိုနားလည် အအေးခေါ်ဆိုမှုစင်တာတွင်ဈေးကွက်။ ထိုအသေချာထိုသို့ကျွမ်းကျင်သူများအဘို့ကြီးစွာသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ဖိလစ်ပိုင်ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် Call Center
ခေါ်ဆိုခစင်တာဌာနများအတွက်လုပ်သားတွေရဲ့အများစု၏ဒုတိယအုပ်စုသည်ဖိလစ်ပိုင်လုပ်သားများမှာရှိပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင် အလွန်ကောင်းသောအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားရှိခြင်း။ သူတို့ကျောင်းနှင့်၎င်းတို့၏အင်္ဂလိပ်ဘာသာကျွမ်းကျင်မှုတွေအများကြီးသင်ယူခဲ့ကြသကဲ့သို့အမှန်တကယ်အလွန်ကောင်းစွာ Arabic အဘိဓါန်ပီအမှုဆောင်အရာရှိများအတွက်နားလည်သဘောပေါက်ထားပါသည်။ ဒါကြောင့်အဲဒီမှာတကယ်ကဒီအလုပ်ဟာအလွန်ကောင်းသောရလဒ်ရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်သူတို့အိန္ဒိယဒူဘိုင်းအတွက်မထက်ပင်အချို့ကြိမ်ပိုကောင်းလျောက်ပတ်သောငွေရှာနေကြသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်ဖိလစ်ပိုင်, တကယ်ကသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ရောင်းဖို့အလွန်ကောင်းသောစျေးကွက်ရှိခြင်း။ သူတို့ရှိခြင်းကြောင့် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွင်းရှိမိတ်ဆွေများနှင့်ဆက်သွယ်မှုတွေအများကြီး။ ဒီတော့ဖိလစ်ပိုင်များအတွက်ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဖိလစ်ပိုင်ကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ်အုပ်စုများ၏ချိတ်ဆက်အများစုရရန်လွယ်ကူသည်။
နှင့်သင်တန်း၏, ကြောင်းအသုံးပြုပုံဖိလစ်ပိုင်ကျွမ်းကျင်သူများအနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်စရာရှိပါလိမ့်မယ်။ နှင့်တူသောကျွန်တော်နှင့်အဘူဒါဘီအတွက်ကြီးမားတဲ့အားသာချက်ဖြစ်သောအလွန်အဆင့်မြင့်ပေါ်မှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကဆိုသည်။ ဖိလစျ ကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ်ကောင်းစွာဥရောပသို့မဟုတ်အမေရိကန်နှင့်ကနေဒါတွင်အလုပ်လုပ်နိုင်။ သူတို့ကအမှန်တကယ်လူမြိုးတစျမြိုးအလွန်ကောင်းတဲ့လူများနှင့်လူဦးရေအဖြစ်အလွန်ဆက်သွယ်မှုများမှာအဖြစ်လူများနှင့်ဖိလစ်ပိုင်အများကြီးမှဖုန်းကျော်ကမရောင်းနိုင်ပါတယ်။
ထို့အပြင်ကြောင်းနောက်ထပ် Nation အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအာရဗီပီဖြစ်ပါတယ်။ အဲဂုတ္တုပြည်၌ဆီးရီးယားနှင့်ဆော်ဒီအာရေဗျတွင်နေထိုင်ကြသူတစ်ဦးတထောင်ကလူရှိပါတယ်။ ထိုအခါသူတို့ကိုအများကြီးအမှန်တကယ်နိုင်ငံခြားသားများဖြစ်ကြသည်။ ထိုသူတို့ကလာမယ့်နေကြသည် အလုပ်အတွက်ဒူဘိုင်းရန်။
ဒါကြောင့်ဒီအခငျြးခငျြးကအရမ်းလူကြိုက်များနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ သူတို့ကအမှန်တကယ်ပြီးသားအရှေ့အလယ်ပိုင်း Market ကအတွေ့အကြုံရှိခြင်းနေကြသည်။ ကာတာနိုင်ငံကူဝိတ်နှင့်အနည်းငယ် Otter Arabic အဘိဓါန်နိုင်ငံများတွင်ဥပမာ။ နှင့် သူတို့တကယ်ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြ။ သူတို့အမှန်တကယ်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည်ဒီတော့ဒါပေမယ့်အာရဗီပီကျယ်ပြန့်အတွေ့အကြုံကိုရှိခြင်း စီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်အထိ သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးကြီးကြပ်ရေးမှူးအဆင့်အထိရာထူး။
ဒါကြောင့်ကျိန်းသေကိုယ့်ကိုကိုယ်ရနဲ့အာရဗီဘာသာစကားနှင့်အတူရင်းနှီးကျွမ်းဝင်။ ဒါဟာပိုကောင်းတဲ့အလုပ်အကိုင်အကမ်းလှမ်းမှုရဖို့သင်ကူညီလိမ့်မယ်။ နှင့်သင်တန်း၏, သင်ဥပမာကွဲပြားခြားနားသောလယ်ပြင်၌ရှိသောမန်နေဂျာအဖြစ်လုပ်ကိုင်ဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ် ဘဏ်လုပ်ငန်း or ဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီအတွက်ဟိုတယ်ဌာန.
ကောင်းပြီ, ခေါ်ဆိုမှုစင်တာပတ်ဝန်းကျင်တွင်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီကြီးများ၏အလုပ်အကိုင်များတစ်စမတ်စိတ်ကူးတူသောပုံရသည်နှင့်သင်လျှင် တစ်ဦးသင့်လျော်သောရေရှည်ပတ်ဝန်းကျင်ရှာဖွေနေ။ နှင့်သင်ကိုယ်တိုင်ထိုကဲ့သို့သောအအေးခေါ်ဆိုမှုများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုချိန်းအဖြစ်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အပါဝငျသညျ။
သငျသညျသူတို့အားအလုပ်အကိုင်များကိုပူဇော်ရသင့်တယ်ဘယ်ကြောင့်ရိုးရှင်းတဲ့အကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။ ကဗေဒရန်ဖြစ်ပါသည်ကိုပထမဦးဆုံးအကြောင်းပြချက် သင့်ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘဝ၌တိုးတက်လမ်း အခြေခံသိပ္ပံသောသူကဲ့သို့, ပြီးတော့သူကကြီးကြပ်ရေးမှူးတစ်ဦးဖြစ်လိမ့်မည်နောက်တစ်နေ့အဆင့်နှင့်ပတ်ပတ်လည်သုံးနှစ်လွန်ပြီးမှရာထူးတိုးတဲ့ သငျသညျပင်စီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်ကိုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အခွင့်အလမ်းများကိုထိမှန်နိုင်ပါတယ်။
သငျသညျငွေရှာသင့်ရဲ့အဓိကလမ်းအတိုင်းဤအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဒုတိယအကြောင်းပြချက်ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည် ဆိတ်ငြိမ်ပိုမြန်လမ်းအတွက်သင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်အပြောင်းလဲပစ်ရန်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်ရုံအခြားကုမ္ပဏီနှင့်မဆိုလေ့ကျင့်ရေးမရှိဘဲသင်၏အတွေ့အကြုံက drop နိုငျသညျ, သငျသညျပွဲချင်းပြီးစတင်ရန်နှင့်တစ်ဦးအစာအာဟာရအစာရှောင်လမ်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ငါတို့သည်သင်တို့ AP ဖြစ်လာအကြံပြုဘယ်ကြောင့်တတိယအကြောင်းပြချက်rofessional အကဲဖြတ်ပိုက်ဆံဖြစ်ပါသည်။ စတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်အပေါ်ဥပမာများအတွက်စစ်မှုထမ်းရဲ့အများစုဟာသူတို့သညျပင် TV ပေါ်မှာတော်တော်များများရုပ်ရှင်တွေကြည့်ရှိနိုင်ပါသည်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံအပေါ်အခြေခံသည့်အတော်လေးကောင်းသောလုပ်ခအောင်ပါတယ်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အဆိုးဆုံးကိစ္စများတွင်ကမန်နေဂျာဖြစ်လာ Pfizer အဆင့်အထိရောက်ရှိရန်ငါးနှစ်ရန်သင့်အားဖွင့်ယူပါလိမ့်မယ်ကြိုးစားရန်မဟုတ်အဘယ်ကြောင့်ဒါကြောင့်သင်ကကျိန်းသေစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သငျသညျငါးနှစ်ဆုံးရှုံးမဟုတ်ဘူး စုစုပေါင်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရေရှည်ဖြစ်နိုင်ချေနှင့်အတူကောင်းသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများကိုရပါလိမ့်မယ်။
ဤသည်မှာအဘယ်ကြောင့်ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ယနေ့ clients များဤဆောင်းပါးကိုကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်သင်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အဒီလိုမျိုးအကြောင်းပိုမိုသတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
ဒူဘိုင်းအတွက် Call Center ဂျော့ဘ်များအတွက်နိဂုံး
ဒါဟုတ်တယ်ငါအအေးမိခေါ်ဆိုမှုပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အလုပ်အကိုင်အလာပြီပေါ့ကအတော်လေးစိတ်ပျက်အားလျော့ဖွယ်တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောသေချာဘို့ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အအေး system ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအဖြစ်သို့သော်အလုပ်လုပ်အများအပြားကုမ္ပဏီများမှ ဒါကြောင့်သင်အနာဂတျမှာပိုကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုရဖို့ကူညီကြမည်။ ထိုကဲ့သို့သောကြောင့်ကျောက်ပုစွန်မြှင့်တင်ရေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခေါ်ဆိုခစင်တာဇာတ်ကားအဖြစ်မှင်ကုမ္ပဏီများသည် join ဖို့နောက်ထပ်ကောင်းသောစိတ်ကူး။ ထိုကဲ့သို့သောခေါ်ဆိုခစင်တာများအဖြစ်ကုမ္ပဏီများအများကြီးပိုမြန်အရှေ့အလယ်ပိုင်းစျေးကွက်အတွက် operating သူစံကုမ္ပဏီများသည်ထက်သူတို့ရဲ့ကြီးကြပ်ရေးမှူးများနှင့်မန်နေဂျာများမြှင့်တင်ကြသည် ဒူဘိုင်းဘူဒါဘီသို့မဟုတ်ဒိုဟာဥပမာ။
သင်သွားရကြသည်နှင့်အသငျသညျကအဘို့ကိုယ့်ကိုယ်ရတဲ့ဖို့ဖြစ်လိမ့်မည်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းရွေ့လျားစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သောအလုပ်ဒူဘိုင်းအတွက်ခေါ်ဆိုခစင်တာအတွက်ပေးထားပါတယ်။ ထိုအခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေ့ကျင့်နှင့်မည်သို့အလုပ်ဒီလိုမျိုးကအစားအလားအလာဖောက်သည်တစ်ဦးကုန်ပစ္စည်းရောင်း၏နွေရာသီဝန်ဆောင်မှုကြောင့်ကောင်းတစ်ဦး salesperson ဖို့ script ကိုသုံးစွဲဖို့။
နှင့်ဤလမ်းအတွက်, သငျသညျကျိန်းသေနှင့်အောင်မြင်သောအများကြီးအလုပ်တစ်ခုစတင်ပါလိမ့်မယ် စီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်အထိရာထူးတိုးဖို့တဝိုက် 10 နှစ်ပေါင်းယူမယ့်အရာဘဏ်လုပ်ငန်းလယ်ပြင်၌။
ဒါကြောင့်နိဂုံးချုပ်အတွက်ဒူဘိုင်းဈေးကွက်အပေါ်အခြေခံပြီး, ကျော်စတင်မယ့်စမတ်စိတ်ကူးပါလိမ့်မယ် ဤမြေကွက်၌ဤကုမ္ပဏီများသည်အထူးသဖြင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ, အမှန်တကယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေ့လျော့ကောင်းတစ်လမ်းကြောင့်သင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုလာပြီ။
ခေါ်ရန်စင်တာအလုပ်အကိုင်များနဲ့တူပုံပေါ် တစ်ဦးအတော်လေးခဲယဉ်းခြင်းနှင့်ကြမ်းတမ်းသောအလုပ် ဒါပေမယ့်ဖြစ်ကြောင်းအဘယ်ကြောင့်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှ mod အဓိပ္ပာယ်မှာအဖြစ်မှန်ကြည့်ထဲမှာသင်ကအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်အလားအလာဖောက်သည်ထုတ်ကုန်ရောင်းချခြင်းလိမ့်မည်။
ဒါကကျိန်းသေသင်ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးမည်ကဲ့သို့နည်းနည်းပိုကောင်းတဲ့လေ့လာသင်ယူကြလိမ့်မည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအောင်မြင်မှုအောင်မြင်ရန်ကူညီပေးပါမည် တစ်အများကြီးပိုကြီးတဲ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် သငျတို့သတဲ့ link ကိုသင်ထုတ်ကုန်မှာပြောနေကြပြီးဒါအချိန်မရွေးသင်၌ pop နှင့်သင်ကိုယ်တိုင်အားဖြင့်သူတို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်ကြီးထွားလာသည့်ကုမ္ပဏီများဖြစ်ကြပြီးသူတို့ကိုသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်န်ဆောင်မှုကိုပူဇော်သက္ကာဘို့လေးကုမ္ပဏီများမှရပါလိမ့်မယ်။
ဒူဘိုင်းမှကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ